Indlu yangoku kwiZiko lesiKhululo sikaloliwe saseNingbo&Metro - I-Airbnb
Indlu yangoku kwiZiko lesiKhululo sikaloliwe saseNingbo&Metro
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguShanshan
Le Ndlu imalunga nama-42 ㎡, iyilwe kakuhle esandula ukulungiswa, icocekile ngokukhazimlayo. Uya kuba nokufikelela kwi-2 Lines (Isikhululo sikaloliwe) ngaphakathi kwe-12 imizuzu yokuhamba.
Nantoni na oyifunayo, iindawo zokutyela ezintle ezikumgangatho ophezulu, ibha ye-cocktails yobugcisa. zonke zingaphakathi kwezinyuko zendlu yethu. Ukuthatha okuthandwayo kuodolwa ngokulula.
Ndiza kukunika iingcebiso ezininzi malunga nendlela yokuhlola i-Ningbo :)
Le ndlu ibanzi inezi:
- Isantya esiphezulu se-intanethi
-Umatshini wokuhlamba kunye nesomisi
Indawo ayinakuba ngcono. Ikufuphi neNantang Old Street, kwisikhululo sikaloliwe. Kwimizuzu emi-5 yokuhamba ungafikelela kwimigca emi-2 yendlela engaphantsi. Ufikelelo olungoyiswayo kwiindawo zabakhenkethi ezifana ne-Bund, iTianyi Pavilion, iDrum Tower kunye nezona ndawo zinefashoni esixekweni njengeTianyi Square, iLake leNyanga.
Le ndlu ye-nordic isanda kulungiswa, kunye nazo zonke izixhobo zangoku kunye nezilungeleyo ezifana ne-Smart Lock, i-Centre-Air-Condition, ukufudumeza Amanzi okuhlamba, oku kuthetha ukuba le yindawo efanelekileyo kwabo bafuna ukuhlala ixesha elide. ezimbini 1.5 * 2m ibhedi ephindwe kabini, kunye nesofa ekhululekile yokuphumla okanye ukulala abantwana.
Ngokungafaniyo nezinye izindlu zasekhaya, isakhiwo sam sinendawo yokupaka, ukhuseleko lokhuseleko, sinikezela ngesikhokelo seNdlela ukukunceda ufumane lula indlu yam.
ILake leNyanga-Apho ungafumana indawo yokubhaka enesonka saseNtshona, iiBha, iCafe, indawo yokutyela yokutya kwaseLwandle lwaseNingbo, Indawo yokutyela yaseNtshona nayo.
IMarike yeNdawo-iMarike yaseYuehu
IMarike enkulu-Sanjiang Super Market
Ibhulorho entle-iBhulorho yaseChenglang
Umbuki zindwendwe ngu- Shanshan